6 Best Offshore Mabhangi Okuvhura Maakaiti - Mazano uye Mazano
6 Best Countries kuzarura Accounting Bank Account
Vanhu vachapa mazano akawanda akasiyana kana achiuya ku yakanakisa mhenderekedzo dzebhengi. Izvi hazvirevi kuti vamwe vavo havana kunyanya kuipa - kune zvakawanda zvingasarudzwa kunze uko. Nyika yakakwana yebhangi kune mumwe munhu kana kambani inogona kunge isingakodzeri kukodzera kune imwe.
Kune, zvisinei, dzimwe nyika iyo vatengesi vari kumahombekombe vari kuramba vachitaura pamusoro. Muchikamu chino, tichaongorora zvimwe zvakanakisisa offshore banking nyika - uye zvavari nani pane.
Nyika Yakanakisisa Yokubhadhara Mitero - Cayman Islands
Zvitsuwa zveCayman zvine mukurumbira wakashata wepasi rese, zvinopa huwandu hwakazara hwemabasa emari kune vatengi vakasiyana siyana. Zvitsuwa zvakare nzvimbo yemutero. Iri izwi rinoti Investopedia inotsanangura senyika inopa vatorwa uye mabhizinesi mari shoma yemutero. Uyezve, ine zvematongerwo enyika uye zvehupfumi zvakadzikama nharaunda, chiri chinhu chinodiwa kuvanhu vazhinji.
Kusava nemitero yakananga kwakaita kuti Cayman Islands ive nzvimbo inobudirira yemabhangi ekumahombekombe, Cayman.com inoti. Hapana mitero pamari inowanikwa muzvikwereti, makambani, kubvisa, pfuma, mubhadharo, kana mari. Mukuwedzera, hapana kutarisana kwekushandura, kubvumira mari isina mari inopinda mukati uye kunze kwezviwi mune chero mari ipi zvayo. Icho hachina chekuchengetwa kwemari.
Kune nzvimbo zhinji dzemitero munyika. Nekudaro, maCaym vakaita zvakawanda kuti vawane mukurumbira wavo seyakanakisa nzvimbo yekubhenekera kumahombekombe. Ivo vanozivikanwa seimwe yepamusoro 10 yepasi rose mari mune epasi. Pamusoro pezvo, mutemo webhangi reCayman Islands unobatanidza clause zvakavanzika kune vatengi vavo. Zvitsuwa zvakagadzira yakasimba kudzora hurongwa hwevashandi vekunze kubhengi masevhisi. Uyezve, ivo vari kukwikwidza mumisika yemari yeEuro.
Zvakakosha kucherechedza kuti, kunyange zvazvo Caymans inopa zvikwereti zvinokosha zvemitero; nyika dzakawanda, dzakadai saUnited States neUnited States, mutero wevagari vayo uye vagari venyika yose mari.
Nyika Yakanakisisa yeVafumi - Singapore
Iwe une $ 200,000 kana inopfuura yauri kuda kuisa muaccount account? Singapore inogona kunge iri yako sarudzo yakanaka. Maitiro eakaundi anowanzo kuve nyore. Muzhinji, iwe unogona kuseta account isina kumboenda kuSingapore, Sing Sav inotsanangura.
Chimwe chezvikonzero vanhu vanosarudza Singapore ndechekuzivikanwa kwaro senzvimbo yakagadzikana, yakachengetedzeka yekuchengetera pfuma. Nyika ine mirawo yakasimba mune yavo yebhengi chikamu. Izvi zvinoreva kuti hupfumi hwako hwakachengetedzwa kwazvo. Mabhangi avo zvakare ane yekucheka tekinoroji. Izvi zvinobvumira kuchengetedza pamwe neku nyore kuwana kwezvinhu zvako.
Singapore inopa akasiyana siyana ehupfumi manejimendi masevhisi, mari, brokerge dzimba, uye maakaundi kuti ushande mari yako. Kune zvakare huwandu hwemapato ekutengesa ekutora mukana wekutora mukana mumisika muSingapore. Uyezve, inokupa iwe nzira dzekuUS, Hong Kong, China, Europe, nezvimwe. MaAccounts anowanikwa mune dzakasiyana siyana dzemari, kuderedza kushushikana kwemitengo yepamusoro yekutsinhana. Mabhangi muS Singapore anewo nyanzvi dzekupfuma hupfumi zvikwata. Aya mahunyanzvi akatsaurirwa kukubatsira iwe kuti uwane iyo yakanakisa nzira yemari yemari yako.
Nyika Yakanakisisa Yekuchengetedzwa Kwemari - Switzerland
Switzerland yakagara iine mukurumbira seimwe yezvakanakisa mabhanga ekumahombekombe ekuviga mari. Chimwe chezvikonzero chikuru zveiyo mitemo yekusungirirwa kwehutano yakasimba yenyika. Vanodzoka shure kwemakore 300, Mashandiro Emabasa Anotsanangura sei. Mutemo weSwitzerland unorambidza mabhengi kuti vasati vaudze chero ruzivo rwemari yako pasina kubvumirwa kwako. Mabhengi anotyora mutemo uyu anogona kutarisana kusvika kumwedzi mitanhatu mujeri. Uyezve, zviremera zvinogona kuzvikwanisa kusvika kune 50,000 Swiss francs. Chero bedzi kunze kweiyo mutemo wepachivande uri munyaya yezvakaipa. Kunyanya kune rimwe chete gore negore kunyorera kune dzimwe nyika zviremera zvemitero kuti usabhadhara mitero.
Nzira yakanakisisa yekuchengetedza purogiramu inodonha zvinhu zvako kubva kunyika yako yekumba; nematare aro. Kuti uite kudaro, zvakakosha kubata account yako mune imwe offshore LLC kana kuvimba. Mitemo yega yega muSwitzerland pamwe nemitemo yekudzivirira pfuma ye Cook Islands kana Nevis inoita izvozvo zvichibvira.
Chimwe chikonzero chekuzivikanwa kweSwitzerland sebhangi rekuchengetedzwa kwemari ndiko kuchengeteka kwaro sehuwandu hwekuchengetedzwa kwematambudziko. Mamiriro ezvematongerwe ezvematongerwo enyika uye ezvehupfumi eSwitzerland akasimba I Swiss Bankers Association (SBA) inodzora mabhangi. Switzerland haibhadhara mitero pazvikwereti, zvikamu kana nhaka, kana kambani yeSwiss isingabhadhari zvikwereti izvozvo. Mutemo weSwitzerland unoda kuti hurumende iwane hutano hwakakwana. Sezvo 2004, SBA yakadzokorora Chibvumirano Chekudzivirirwa kweDepositor. Chibvumirano ichi chinovimbisa kuti kana zviitiko zvisingabhadharwi nebhangi, vanoisa mari vacharamba vachiwana zvikwereti zvavo zvepamutemo.
Nyika Yakanakisisa Yezvikwata - Nevis
Kana uri kutarisa kuendesa kambani yako yekunze, Nevis ndeimwe yezvisarudzo zvakanakisisa. Ikoko ndipo patinoumba nezve 70% yemakambani ekumahombe zvatinosanganisira. Ndezvipi zvinonakidza vanhu vazhinji kune zvitsuwa ndezvavanochengetedza zvigadziro zvadzo, pasi shoma uye yakakwirira mitemo. Izvi zvinonyanya kukosha kuNevis LLC, nekuda kwemitemo yayo ine simba yekudzivirira pfuma. Nevis makambani ane masimba ekushanda anoshandiswa uye anoshandisa zvishoma zvigwaro zvinodiwa. Hapana humwe mitsara kana mitemo uye Financial Services Commissions inoramba yakakwirira.
Nevis makambani ane zvikomborero zvikuru kune vambani vekambani uye vagoveri / LLC nhengo dzakafanana. Makambani anogona kutamira kune dzimwe nyika, kana kusimbisa kana kubatana nevamwe veNevis kana makambani ekune dzimwe nyika. Hapana mutemo unoda Nevis makambani kuti ave nemari yakawanda. Uyezve, zvikamu zvinogona kuziviswa nevakuru vekambani. Vashandi vanogona kuchengetedza uye vanogona kubva kunze kwekambani pane zvakakosha. Uyewo, makambani eNevis anokwanisa kutora zvikamu zvavo pamatengo ekutsvaga pasi rose. Izvi zvinosanganisira NASDAQ, London Stock Exchange, International Securities Exchange, nezvimwewo.
BVI ndiye aimbova anokunda mune izvi. Asi nemitemo inoremedza, masimba-iyo-ave akabudirira akagadzira chirume "Go Away" chiratidzo chekutonga. Tinotarisira kuti pakupedzisira vachamuka uye vanoona kune dzimwe sarudzo pasi rose. Zvichida hutungamiri huchatsiva vatongi vemazuva ano nevaya vane inji yebhizimisi savvy. Zvichida, zvichida vanogonazve kudzoka zvakare.
Nyika Yakanakisisa Yepamusoro Inofarira Mitengo - Belize
Kana iwe uchitsvaga mari yakanakisisa yebhangi yebhangi yemari, zvinenge zvichiitika kuti Belize haichazove pane iyo urongwa. Pane kudaro, kutsvakurudza kwako kungaratidza nyika dzakadai seUkraine, iyo inofanirwa kusvika kune 20% inhara yekutambira. Inonzwika zvakanaka, zvakarurama? Zvinodaro, kusvikira iwe uchitarisa zvinhu zvakadai sokuperesa uye kubhengi kwebhangi. Kuwedzera kwezvinhu muUkraine kuri 49%. Icho ndicho musiyano we29% unohupa iwo hutsika hwakaderera huwandu hwekuda, maererano neGo Go Banking Rates. IUkraine ine matambudziko makuru maviri: iri chigaro chekubhadhara mari uye mari yeUkraine yave ichiderera. Izvi zvinoreva kuti mari yako haisi yakachengeteka zvikuru, uye iwe ungasazoona kuti yakanaka 20% inodzokera kunekutsvaga.
Saka Belize? Nezvekunyora uku, Belize ine chaiyo yekubhadhara rate yeinenge 2.54%. Iyo ine inflation mwero wepedyo ne0%, sepanenge pakati 2019 paKutengeserana Economics. Izvo zvishoma zvakakwirira kupfuura dzimwe nyika dzakataurwa mune ino nyaya, kuwedzera kuUS neCanada. Kunyangwe izvo zvisiri 20%, Belize zvakare nyika yakagadzikana ine zvimwe zvakawanda zvakabatsirwa. Lan Sluder anotsanangura kuti Belizean nhoroondo dzepasi rose hadzisi pasi pemitero yemuno kana kudzoreredza kudzora. Vanobata account vanogona kusarudza kubva kumari zhinji dzemari, uye mwero wekutsinhana pakati peBelize neUS is 2: 1. Nyika ino zivikanwo nekusimudzira kuvanzika kwevatengi vavo. Uye zvekare, mabhangi epasi rese eBelizean anotambira kune vatengi vekunze - hapana vatengi vemunharaunda vanotenderwa.
Nyika Yakanakisisa Yokuchengeteka - Germany
Mune ruzhinji rweGlobal Finance runyorwa rwanhasi rwemabhangi akachengeteka, rimwe remabhangi eGerman anotora huwandu nzvimbo. Germany inobata mamwe matatu slots ari pamusoro pegumi, pane ese ezvitanhatu mune zvinyorwa zve50. kubhadhara, kambani yeGerman, inogovera chikonzero chikuru cheGerman ichive iyo mabhenefiti akachengetedzeka kwazvo emhiri kwemakungwa. Vanoti ndiko kudzikama kwenyika; kunyanya zvehupfumi. Iyo inowanikwa mukurumbira yekuchengetedza, kutarisa, uye maakaundi ekuchengetedza.
Kubva kuGermany ndeye nyika yemazuva ano uye yakagadzirwa, vateereri vekambani vachave nekodzero yehutano-hwe-in-inyanzvi yepaIndaneti uye maATM, 24 / 7. Muzviitiko zvizhinji, haufaniri kuvapo kuti uzarure kambani muGermany. Uyezve, mari yekuzarura uye yekuchengetedza kazhinji inenge isiri pasi. Dzimwe mabhengi anopawo sarudzo yekuwana Visa kana MasterCard kadhi rechikwereti zvakare. Zvikomborero zvakanyanya kana iwe uchida kufamba. Ikozvino, sekuve nekinyorwa muEuro kunogona kubatsira muEurope yose. Uyezve, mamwe mabhangi ane zvimwe zvinowanikwa kune vanogara vachifamba.
Haisi nzvimbo yakanaka kana iwe uine mhosva inouya mushure mako, zvisinei. Germany inosimbisa kutongwa kwekunze. Saka, kana kuchengetedzwa kwemidziyo chiri chinangwa chako, enda kumwe kunhu.
Best Offshore Bank Mazano Okuvhura Aunti
Kuvhura account mune chero yeenyika idzi kunosiyana mukuomerwa uye kurasikirwa nenyika nenyika. Wakagadzirira here kutora danho rinotevera uye kuvhura yako offshore bank account kana kuwana rumwe ruzivo? Inzwa wakasununguka kutaura nemumwe wevashandi vedu vezvemari. Ivo vanogona kuve nechokwadi kuti iwe uri kuwana zvakanyanya kubva kuaccount yako. Uyezve, vashandi vedu vanogona kushanda neaka accountant yako kuti uve nechokwadi chekuti iwe uri kutevedza mitemo yemutero yakakodzera.
Investopedia inopa zvimwe zvinhu zvekuisa mupfungwa kana uchivhura account yeofficial. Izvo zvinodikanwa zvekutanga zvichave zvakafanana nekuvhura account munyika yako yekumusha. Iwe uchabvunzwa ruzivo pachako sezita rako, zuva, rekuzvarwa, kero, vagari, uye basa. Kunyangwe nyika dziine mitemo yakasimba yekuvanzika ichabvunza izvi. Izvi zvinodaro nekuti zvakakosha paunenge uchiisa yako account kuti iyo bhengi inogona kuratidza chako chitupa.
Mamwe magwaro aungade account yako anosanganisira zvinhu zvinotevera. Ivo vangangokumbira kopi rezinesi rako rekutyaira uye / kana pasipoti uye humbowo hwekero. Uye zvakare, masangano mazhinji anokumbira magwaro ekureva zvemari kubva kubhengi rako razvino. Vanogona kubvunza nezve mhando yezvinhu zvinotarisirwa kupfuudza mumaakaunti. Mukuwedzera, ivo vachazofanirwa kuverengera chako chitupa. Iyi ndiyo anti-mari yekudyara mirau. Mabhangi anoda kuona kuti munhu haasi kushandisa masevhisi avo zvisiri pamutemo.
Mhedziso - Kuwana Rakanaka Bank
Sezvauri kuona, hapana-saizi-inokodzera-ese. Pane zvakawanda zvekusarudza kana zvasvika pakusarudza nyika iyo yekuvhura iyo bank account offshore. Nyika dzese dzatsanangurwa pamusoro apa dzinowana zvakanaka kupfuura zvavari. Tsvaga kuti ndeipi nyika yakakodzera iwe. Kuti uite kudaro, iwe unogona kutsvaga rubatsiro rwemumwe wevashandi vezvemari vane ruzivo. Ndokumbirawo ushandise fomu yekubvunza kana nhamba dzefoni pane ino peji. Iwe unogona kutibata nesu uchishandisa imwe yeiyi nzira. Ipapo iwe unogona kutanga pane offshore bank account iyo yakanakira iwe.
Kana zvasvika pakuchengeteka kwemifananidzo yako yemari uye kuronga kuchengetedzwa kwako, chengetedza aya matipi mupfungwa. Mukuwedzera, iwe unoda chete yakachengeteka uye yakachengeteka zvakanyanya emari masangano epasi. Zvichienderana nehutongi hwaunosarudza, sangano iri rine ukama nechekuchengetedza mabhangi ekumahombe anopa zvakanakisisa mukugadzikana nekuchengeteka.
Mabhangi ekunze kana kumahombekombe emabhangi anoreva kumabhangi mazhinji nemasangano ekudyara. Ivo vanowanikwa mune nyika uye masimba kunze kwenyika nyika depositor. Nehunyanzvi munhu anogona kufunga nezve chero bhanga rekunze kana asangana nemusoro maitiro. Zvakare, nyanzvi dzinowanzo chengetedza izwi rekuti kubhengi masangano ari kwavanoremekedza zvakavanzika zvekuchengetedzeka.
Kubva zvavakabva, Offshore Banks, inoratidzwa zvisirizvo inoratidzwa neese midhiya nenzvimbo dzeimba zvakafanana. Kupomerwa kwakasiyana kubva pakubvisirwa mutero kusvika pakubvisirwa mari. Asi nyatsoongorora chinangwa chechokwadi cheOffshore Banking account. Wobva waita tsvakiridzo isina kubatwa kuti uone kuti mari isiri pamutemo inogadzirwa kupi kana kuti “inoshambadzirwa.” Izvi zvinojekesa mamiriro ezvinhu. Dzimwe mhosva dzenhema dzakatenderedza kutsoropodza kwenzvimbo dzisina kuchengetedzeka, kutadza kuita zvakanaka, nezvimwe.
Zvekare, izvi hazvigone kubva kure kubva pachokwadi. Yakawanda Offshore Bank Account kutonga kwese repureti kwakanyanya, kwakagadzikana mabhangi mitemo. Izvi zvinodaro nekuti ivo mune yavo yakanaka kufarira kukwezva nekuchengeta vanoisa mudura. Iwo masimba anoteedzera izvi mirairo yekunangana nezvinodiwa zve depositor. Mazhinji emasimba aya anovimba nemari yekune dzimwe nyika inochengetwa mumabhangi sechinhu chikuru chehupfumi. Uyezve, aya mabhangi anowanzove ari kwawo makuru ekudyara kwekunze.
Tsanangudzo yakajeka yebhanga reOffshore ibhengi riri mune imwe nzvimbo kana nyika yakasiyana nemasimba kana nyika inogara mutengesi kana mushambadzi. Imwe yemabhenefiti mazhinji ekubata Offshore banking account ndeyekuti ivo vanowanzo kuwanikwa munzvimbo dzematekisi. Uyezve, iwo ane mitemo inopa kwakakura kuchengetedzwa kwemidziyo uye zvakavanzika kubhenefiti kubhengi account yebhangi. Aya masimba anowanzobvumidza kudzoreredzwa kwezvirambidzo maererano nemhando dzemakadhi ekubhangi ekunze. Iko kune mirau inopa njodzi kumiganhu kune vanoisa kana vanoisa mari. Nekudaro, vatongi vanoteedzera kuti bhangi rinobata sei uye sei kushandisa mari yekuchengetedza yakanyanya depositor. Zvikuru uye zvakadaro, zvakadaro, ma Administrator anoda kupa kune vanoisa mubhangi nhamba yakawanda yemabhangi uye sarudzo dzekudyara. Izvi zvinoenderana nekudzikira mutemo kune deporiti.
Iyo yakakurumbira nzvimbo dzekunze kumahombekombe inowanzopa kuderera kwakanyanya kwekuremerwa kwemitero. Ipo, izvo zviri mune dzimwe nyika, seUS zvinoripisa vagari vemunyika pamari yepasi rose. Nezvinangwa zvedu pano isu tinotarisa chete kune izvo zvakayedzwa kuti zvipe zvakanaka zvinobatsira sezvakatsanangurwa pamusoro apa. Aya mabhangi eOshore anogona kuve muzvitsuwa-nyika senge maCaymans kana Channel Islands. Zvikasadaro, ivo vanogona kuve munyika dzakavharwa seSwitzerland. Switzerland yave iri nzvimbo yemutero kweanopfuura makore zana - uye yakareba kupfuura marudzi echiwi.
Pave nekutaura kwakawanda maererano nekuvanzika kwemabhangi eSwitzerland. Iwe unozoona, zvisinei, chete mabhangi eSwitzerland anga aine nyaya aya mabhangi ane matavi ari kunze kweSwitzerland. Chikwereti Suisse uye UBS ine yakakura US kuvapo. Nekudaro, vatongi veUS vanogona kuita nzira yavo nemabhangi aya. Idzo dzine nzvimbo dzeSwiss dzakachena dzinoramba dzichichengetedza zvakavanzika.
Sezvataurwa mundima yatavhura nayo, pane huwandu hwefungidziro isiriyo uye ngano dzakabatana nemaakaundi ebhangi ekunze. Ari Offshore Banks Ndiye Gare reVachimari Mari uye Matsotsi? Verenga chikamu chebhengi ngano pane ino webhusaiti kuti uwane rumwe ruzivo. Munyaya ino, isu tine rumwe ruzivo nezve Offshore Bank Account Ngano dzinofanirwa kutorwa mukufungwa.
Ndekupi Kwokugadzira Account Your Account?
Izvo zvakakosha kuti usarure kutonga kwakakodzera paunosarudza kuti ndeipi mutemo wekushandisa seyakatarisana nemabhangi ekune dzimwe nyika. Ruzhinji rwemitambo yekumhiri kwemakungwa vane njere, mirau yakajeka. Ivo vari munzvimbo yakarongedzerwa kuchengetedza iyo deposits uye kuchengetedza zvakavanzika. Nekudaro, vamwe vanoyera mabhenefiti avo mukubhadharisa mutero, nepo vamwe muchivande, zvichingodaro.
Kunyangwe vese vachipa nzvimbo yakavanzika uye yakachengetedzeka, zvine basa rekutarisa kuti zvinangwa zvebhangi ndezvei. Ipapo iwe unogona kusarudza simba maererano. Vashoma mashoma emahofisi emahombekombe vanoita zvisina kunaka mabasa ekutonga uye kudzora mashandiro avo ebhengi. Asi iye anochengeterwa mari kana chipangamazano achaona izvi sezvisina kukodzera ivo pachavo kana vatengi. Kupfuurirazve, aya asina kurongeka akaronga uye anotungamira masimba anowanzo kunyengedzwa nevasori vasina mutemo. Nekudaro, vanoratidza tarisiro dziri nyore dzeFATF (Financial Action Task Force) vachitsvaga mari yekubira kana imwe mhosva.
Heino imwe nyaya inobatana pamusoro Cayman Islands Banks uye imwe pamusoro
Belize Banking. Pano, iwe uchaona rumwe ruzivo nezve idzi mbiri mbiri dzakakurumbira.
Nhoroondo yeInternet Bank Accounts
Icho chinhu chinosuruvarisa kuti veEurope vave vaine nguva yakaoma mutero mitoro. Izvi zvaive zvechokwadi paBritish Isles sezvazvaivewo mukondinendi. Vanhu vekuEurope vakatarisana netarisiro yekuona zvinhu zvavo zvakawanikwa zvakaoma nehupfumi zvichiderera. Kubata kwega kwega kwevateresi ruoko vakapamba hupfumi hwavo. Naizvozvo, iyo kondinendi yakaibva kuti ive mhinduro.
Ipapo mhinduro yakauya. Iyo diki, chitsuwa nyika nyika inozivikanwa seChannel Islands yakauya nepfungwa. Vakaratidza kuti idzi dzakashungurudzika amana kuti amana akaiswa mumabhangi ayo anogona kusununguka kubva mukuongorora. saka, iyo mutoro unorema-mutero mutero. Izvi zvakanaka zvakagutsa vazhinji vehupfumi veEurope. Nenguva isipi basa iri rakapora. Dzimwe hutongi diki dzaitarisisa. Ivo, zvakare, vakafarira kuenda kune imwe nyika-inokwezva magneti uye ivo vakatanga kugadzirisa masangano avo ebhengi. Dzakawanda dzenyika dzakagamuchira zvakatemwa, zvakatsiga mabhengi mitemo uye mirau. Nekudaro, ivo vakadzoreredza kushushikana kungangoita kwevanotengesa mari nevanodziisa mari. Bhanga reOsshore rakanga roda kutanga!
Uye munguva pfupi yakatevera izwi rekuti "Offshore banking" rakaenderana nechero ripi zvaro diki, nzvimbo dzakatongwa. Ivo vakapa zvakachengeteka, zvakachengeteka, zvakavanzika kubhengi nemirairo inoshanda. Nenguva isipi nyika yese yaive "mukuziva." Vakatanga kuona nzvimbo idzi senzvimbo dzekugadzirisa zvavanoda. MaAmerican, maAfrikaans, maAsia, nezvimwewo, vakawana maakaundi aya eOnshore bank anobatsira kwazvo kune zviuru zvezvikonzero. Kusiyana nemabhangi avo kumba, aya mabhangi eOffshore aisawanzo tenderedzwa mhirizhonga yezvematongerwo enyika kana kunetsana kwehupfumi. Mabhizinesi mazhinji akadzidziswa aivaziva ivo nezvekugadzikana kwavo kwezvematongerwo enyika uye emari uye nemidziyo yekuchengetedza zvombo.
Offshore Banks muMedia
Mumakore kubvira, ivo vauya mukushandiswa kukuru uye nekudaro zvinowoneka. Panguva imwecheteyo, midhiya yakaratidzira mabhengi ekunze zvisizvo. Uyezve, masimba akakura anotapura mukurumbira wawo senzvimbo dzinomhan'ara dzemutsotsi pasi pevhu. Marudzi ane mutero wakakwira uye mabhangi akakwira anozviratidza senzvimbo yechokwadi yezvivakwa zvinowanikwa zvisiri pamutemo. Vanoedza kupenda kwavo sekusarudzika nzvimbo dzekutsvaga mari.
Vagadziri vane mari-vane mari nevanoisa mari vagara vachiziva kuti kusarura uku hakugone kubva pachokwadi. Vanoziva kuti mabhangi ekunze anogona kunge ari anoshanda nenzira dzakanaka kumahara emidziyo; inhare dzakasimba dzemari inoda kuchengetedzeka, kuchengetedzeka, kuchengetedzwa. Uyezve, ivo vanoziva kuti mabhangi aya anogona kuchengetedza mari yavo. Kureva kuti, vanochengetedza hupfumi kubva kunhamo dzevagari vemo, dzehupfumi, kana dzezvematongerwo enyika kudzimba dzadzo. Nhasi, mabanki emhiri kwemakungwa anoenderera mberi nekuchengeta kuguma kwekubatirana. Vanoenderera mberi vachipa nzvimbo dzakachengeteka, dzakavanzika. Ivo vanopa refuji kune avo vanotsvaga kuchengetedza mari kubva kune njodzi dzekusafanira mutemo uye mutero.
Vakawanda vanosarura depositor vakabatsira kubva kwakachengeteka, kuvanzika, uye kwakaderera mutero nharaunda. Ndozvinopihwa neakaundi yekubhangi remhiri. Izvo zvakakosha kuti uongorore zvinangwa zvako uye nekukurukura nezvazvo nehunyanzvi, ane ruzivo mumiririri usati wasvetukira mumvura isina kuvakwa. Kune zvakawanda zvakanaka zvisinganzwisisike zvinopihwa nekutanga iyo Offshore bank account. Kuzivikanwa kwavo pakati pevanoisa mari uye vanoisa mari kuti vape iyo nzvimbo yekubhengi ine hutano ine kuchengetedzwa kubva kune dhadha uye kuvanzika kuri kukura. Zvakare, mabhengi emhiri kwemhiri anoenderera mberi nemukurumbira uyu-wakawana wekuchengetedza zvinhu, kuderedzwa kwemitero (zvichienderana nekutonga kwako), uye zvakavanzika zvekuchengetedzeka kwepamusoro.
To chitsauko 8>